Marooko - Wikipedia
Coordinates: 33°32′N 7°35′E﻿ / ﻿33.533°N 7.583°E﻿ / 33.533; 7.583
- Taakiikh 2 maarso, 1956
- Total 446,550 km2 km²
- Biyo (%) 0.06
- 2009 qiyaas 31,993,000
- Total $0.225 trillion
Mapka dalka marooko
Marooko (Af-Carabi المغرب, al-Maġrib, ama Boqortooyada Marooko waa dal dhaca woqooyiga iyo galbeedka Afrika. Marooko waa dal carbed, oo badkiisu dhan yahay 710.850 km², haddii lagu daro lamadegaanka Galbeed. shacabka ku nool waxay gaarayaan 31,993,00 qof. Marooko waxey soohdin la wadaagtaa dalalka Al jeeriya,dhinaca galbeed waxaa ka xigta Badweynta Atlaantik, iyo saxaraha Galbeed oo ah gobol gooni ugoosad ah isla markaana leh maamul u gaara. Morocco / (mawduucyada dhegaysta): Carabi: Makhriga, turjumaadda al-maokrib, lit. 'meel qorraxda ku dhejiya; galbeedka'; luqadaha Berbera: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translit Lmeɣrib), si rasmi ah Boqortooyada Morocco (Arabic: المملكة المغربية, turjubaan al-Mamlakah al-Maghribiyah, lit. 'Boqortooyada Reer Galbeedka'; luqadaha Berber: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translation, Tageldit n Lmaɣrib), waa gobol madax bannaan oo ku yaal Waqooyi-galbeed Afrika. Waa mid ka mid ah guryaha dadka ajaanibka ah ee Berbers ah oo asaliga ah.   Juquraafi ahaan, Morocco waxaa lagu gartaa gudaha gudaha xaafadaha dhaadheer, khariidado waaweyn oo lamadegaan ah iyo xeebta fog ee xeebta Atlantic iyo badda Mediterranean.
Morocco waxay leedahay dad ka badan 33.8 milyan iyo aag ah 710,850 km2 (274,460 sq mi). Caasimadeeda waa Rabat, magaalada ugu weyn waa Casablanca. Magaalo kale oo waaweyn waxaa ka mid ah Marrakesh, Tangier, Salé, Fes, Meknes iyo Oujda. Morocco waxay leedahay taariikh madax-bannaan oo taariikh ahaaneed oo madax bannaan oo aan la wadaagin deriskooda. Tan iyo aasaaskii gobolka ugu horreeyay ee Moroccan by Idris I 788 AD, dalka waxaa xukuma aalado madaxbannaan oo madaxbannaan, iyada oo la gaarey jeexitaankeeda hoyga Almoravid iyo godadka Almohad, qaybo ka mid ah dalalka Iberia iyo waqooyi-galbeed ee Afrika. Marinid iyo Saadi waxay sii wadeen dagaalka ka dhanka ah shisheeye shisheeye, Morocco waxay ku sugnayd dalka kaliya ee waqooyiga Afrika ee ka soo horjeeda si looga fogaado shaqadii Osman. Sanadkii 1912, Morocco wuxuu u qaybsanaa Faransiis iyo Isbaanish, oo ku yaal aag caalami ah oo ku yaal Tangier, kuna soo celiyay xornimadii 1956. Dhaqanka Morocco waa isku-dhafka Berber, Carab, Saamaynta Galbeedka Afrika iyo Yurub.
Morocco waxa ay sheeganeysaa dhulka aan iska degenayn ee reer galbeedka Sahara, oo horey u ahaan jiray Sahara Isbaanish, sida gobollada koonfureed. Ka dib markii Spain ay ogolaatay inay xaddiddo dhulkii Morocco iyo Mauritania sanadkii 1975, dagaallo qabaa'illin ah ayaa la kacay xoogagga maxalliga ah. Mauritania waxay ka soo saartay sheegashadii 1979-kii, dagaalku wuxuu socday ilaa 1991-kii dabkii la joojiyay. Morocco waxay hadda ku jirtaa saddex meelood laba meel oo ka mid ah dhulka, iyo geeddi-socodka nabadeed ayaa hadda ku guul-daraystay in ay jebiso siyaasadda ba'an.
Morocco waa boqortooyo dastuuri ah oo leh baarlamaan la doorto. Boqorka Morocco wuxuu hayaa awoodo madax-bannaan oo sharci-dejineed, gaar ahaan ciidanka militariga, arrimaha siyaasadda iyo arrimaha diinta. Awoodda Fulinta waxaa sameeya Dawladda, iyada oo awoodda sharci-dejinta ay leedahay labada dowladood iyo labada aqal ee baarlamaanka, Golaha Wakiilada iyo Golaha Guurtida. Boqorku wuxuu soo saari karaa qaynuunno loo yaqaan 'dahir, oo leh awood sharciga ah. Wuxuu sidoo kale kala diri karaa baarlamaanka kadib markii uu la tashaday Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha maxkamadda dastuurka.
Mausolèu Mohammed V a Rabat.
Boulevard de París a Casablanca, Marròc.
Morocco waxay leedahay xuduud u dhaxaysa Badda Atlantic ee ku taal xeebta Badda Mediterranean-ga ah. Waxaa xuduud u leh Spain dhanka waqooyiga (xudduudaha biyaha iyada oo loo marayo xudduudaha dhulka iyo xudduudaha dhulka leh seddex yar oo yaryar oo Spanish ah oo la xakameeyey, Ceuta, Melilla, iyo Peñón de Vélez de la Gomera), Aljeeriya dhinaca bariga, iyo Galbeedka Galbeedka oo koonfur . Maadaama Morocco ay gacanta ku hayso inta badan Reer Galbeedka Galbeed, xuduudaha koonfureedna waxay la mid yihiin Mauritania.
Xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee waddanka ayaa u dhaxeeya waddooyinka u dhaxeeya waddooyinka 27 ° iyo 36 ° N, iyo dhererka 1 ° iyo 14 ° W. Marka la kordhiyo Sahara Galbeed, Morocco waxay inta badan u dhaxeysaa 21 ° ilaa 36 ° N, iyo 1 ° iyo 17 ° W (Ras Nouadhibou peninsula waa wax yar koonfurta 21 ° iyo galbeedka 17 °).
Juquraafka Morocco waxa uu ka yimaadaa bada Atlantic, ilaa buuraha xuduudaha ah, si ay u degto xeebaha Sahara. Morocco waa dal Waqooyiga Afrika ah, oo xuduud la leh Woqooyiga Atlantic Ocean iyo Badda Mediterranean, oo u dhexeeya Algeria iyo Sahar Galbeed. Waa mid ka mid ah saddex dal oo kaliya (oo ay weheliso Spain iyo Faransiiska) si ay u helaan labada xarumood ee Atlantic iyo Mediterranean.
Qayb wayn oo ka mid ah Morocco waa buur. Buuraha Atlas waxay badi ku yaalliin bartamaha iyo koonfurta dalka. Buuraha Rif waxay ku yaalaan waqooyiga dalka. Labada noocba waxay inta badan ku nool yihiin dadka reer Berber. At 446,550 km2 (172,414 sq mi), Morocco waa dalka kow iyo todobaad ee ugu weyn adduunka. Aljeeriya waxay xuddun u tahay Morocco ilaa bari iyo koonfur bari, inkastoo xudduudda u dhaxaysa labada dal la xiray ilaa 1994.
Qaybta Isbaanishka ee Waqooyi-galbeed Afrika oo deriska la ah Morocco waxay ka kooban tahay shan xarig oo ku yaal xeebta Mediterranean: Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, jasiiradaha Chafarinas, iyo Perejil oo lagu muransan yahay. Ka baxsan xeebta Atlantik ee Canary Islands ayaa ka mid ah Spain, halka Madeira oo waqooyiga yahay Portuguese. Dhanka waqooyiga, Morocco waxaa xuduud la leh Gebaltar-dhiska, halkaas oo maraakiibta caalamiga ah ay marin habaabin taraafikada u dhaxeysa Atlantic iyo Mediterranean.
Buuraleyda Rif waxay ku fidsan yihiin gobollada Mediterranean ee waqooyi-galbeed ee waqooyi-bari. Buuraleyda Atlas waxay hoos u dhisteen laf-dhabarka dalka, laga bilaabo waqooyi-bari ilaa koonfur galbeed. Inta badan qaybta koonfureed ee dalka ayaa ku taala xeebta Sahara, sidaas darteed guud ahaan si aan caadi aheyn oo aan dhaqaaleynin. Inta badan dadku waxay ku nool yihiin waqooyiga buuraha, halka dhinaca koonfureedna ku yaala Galbeedka Sahara, oo ah qabiil hore oo Isbaanish ah oo uu ku biiray Morocco sanadkii 1975-kii (fiiri Green March)  Morocco waxa ay sheeganeysaa in Galbeedka Galbeedku qayb ka tahay dhulkeeda waxayna tilmaamayaan in ay yihiin Gobollada Koonfureed.
Magaalada caasimadda Morocco waa Rabat; magaaladeeda ugu weyn waa dekedda ugu weyn, Casablanca. Magaalooyinka kale ee lagu diiwaangeliyay dad ka badan 500,000 oo ka mid ah tirakoobkii Moroccan ee 2014 ayaa ah Fes, Marrakesh, Meknes, Salé iyo Tangier. [56
↑ Maaroufi, Youssef. http://rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original 2016-03-04. Soo qaatay 2018-09-06. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Marooko&oldid=215044"
Last edited on 9 Agoosto 2021, at 09:01
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 09:01.